Udonga Lwegalari - Izinyathelo zokudala isitayela sakho | Bezzia
USusana godoy | 12/05/2022 14:00 | Tricks umhlobiso
Ithrendi yokuhlobisa 'njengodonga Lwegalari' ingenye yezinto ezinhle kakhulu onganikela ngakho ekhaya lakho. Kunjalo, ungakwazi njalo ukukulungisela okuthandayo, kodwa ngaphandle kokungabaza ozokuzuza ukubheja odongeni okungenzeka ukuthi lungazange lube nokugqama okukhulu. Uzomnika futhi udale indawo yokuqala kakhulu.
Kungumqondo ukuthi ikuvumela ukuthi uqoqe amashidi emisebenzi yobuciko, izinkumbulo zempilo yakho, izithombe noma yonke into efika engqondweni, ukuze uhlobise leso sikhala esidinga ukuphila kancane. Ngakho-ke, ngokusekelwe kulokho, sikushiya namathiphu angcono kakhulu noma amaqhinga okuwenza ngendlela obulindele ngayo.
1 Bheja eqoqweni losayizi abahlukene
2 Hlela iphazili yohlaka
3 Dala 'Udonga Lwegalari' ngaphezu kweshalofu
4 Khetha i-oda le-'Gallery Wall' yakho
Bheja eqoqweni losayizi abahlukene
Sibheka indawo yokudala, into engalandeli umthetho ofanayo nokukwazi ukubeka imidwebo embalwa. Ngamanye amazwi, okuyisisekelo kakhulu kushiywe eceleni ukuze kunikeze ukuphila kokuthile kokudala okwengeziwe. Ngakho, okokuqala, akukho okufana nokubheja kuma- finishes osayizi abahlukene. Ungakhetha amaphrinti angena kumafreyimu amakhudlwana kanti amanye kwabancane. Kodwa kuyiqiniso ukuthi kumelwe kube nokulinganisela phakathi kwalokhu okubili. Ngeke ubeke eyodwa encane neyisihlanu enkulu, ngoba izobukeka ingalingani. Okufanayo mayelana namajamo. Ungakhetha amafreyimu ayisikwele nawonxande. Nakuba sikhuluma ngamafreyimu, izithombe ngeke zihambe, kodwa zingaba izithombe noma amashidi.
Hlela iphazili yohlaka
Njengoba sesishilo, into eyisisekelo kakhulu ukuthi izinto ozoba nazo 'Kudonga Lwegalari' yakho zingaphakathi kohlaka. Ngakho-ke, enye yezinketho okufanele ukwazi ukunikeza impilo kuleyo kholaji oyithandayo kakhulu, ukudala uhlobo lwephazili. Ungabeka wonke amafreyimu phansi, ukuze enze ucezu olulodwa. Lokhu kusho ukuthi ungakha umumo omkhulu wejiyomethri ngokuhlanganisa noma ukufaka wonke amafreyimu, amasayizi ahlukene kanye namajamo. Khona-ke, uma usuyihlele phansi, ungayiyisa odongeni. Nakuba uma uthanda, kungase futhi kube nokuhlukana phakathi kwamafreyimu futhi kuzoba enye inketho ekahle.
Dala 'Udonga Lwegalari' ngaphezu kweshalofu
Uma isayithi lilincane noma ungafuni 'ukumboza' lonke lolo donga ngezinkumbulo, ungakwazi njalo ukwenza ngenye indlela elula nehlangene. Ngoba, Ungabeka ishalofu noma ishalofu. Kuyo uzobeka izithombe noma amafreyimu anezinkumbulo zakho ozithandayo. Ngale ndlela uzodala iqoqo elingaphezu kwezithombe ezinhle kakhulu ezizonikeza impilo kulolo donga noma lelo gumbi. Futhi, akulimazi ukuhlanganisa osayizi abahlukene ngisho namafreyimu emibala ehlukene, ikakhulukazi uma udonga lumhlophe. Njengoba lokhu kuzodala umphumela wokubonwayo wokuqala.
Khetha i-oda le-'Gallery Wall' yakho
Ngaso sonke isikhathi sikhulume ngombono wokuhlukahluka kwemibala, osayizi bozimele kanye nokuma. Kodwa, ungacabangani ngokukhetha ukufanisa udonga nohlaka olufanayo ngombala nosayizi? Hhayi-ke, kungenye indlela lapho ukuhleleka kuwina ngamatshe. Ngoba kufanele ukhethe inombolo yozimele ozoyibeka eduze komunye bese, ngezansi nje ngaphandle kokushiya noma yisiphi isikhala. Amafreyimu kufanele abe nombala nokuma okufanayo. Yiqiniso, ngaphakathi ungakhetha izinkumbulo, izithombe noma imininingwane ofuna ukuyigcina iphila. Uma ufuna ukugqamisa 'Udonga Lwegalari' yakho, bese uzama ukwenza lawa mafreyimu ahluke nombala wodonga.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Tricks umhlobiso » Izinyathelo ezinhle kakhulu zokudala eyakho 'I-Gallery Wall'